Sales & Marketing Executive Archives - Glory Assumption Space
Sales & Marketing Executive – Male/Female (10) Post / လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း)
အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Sales & Marketing Executive – Male/Female (10) Post / လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း) / တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ။ •	Bachelor’s degree in Marketing, Communications, or related field is advantageous. •	Must have2Year Orr more Experience in Construction Material with Sales & Marketing. •	Proven experience in sales and customer service. •	Proficient in all Microsoft Office applications. •	The ability to work inafast-paced environment. •	Excellent problem-solving skills. •	Effective communication skills. •	Exceptional customer service skills. •	Location should be South Okkala , North Okkala, Insein, North Dagon, Thingangyun, East Dagon, South Dagon •	Office Hour : (8:30 AM & 5:00 PM ) •	Office Off Day : Sunday & Public Holiday GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Construction Material Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales & Marketing Executive – Male/ Female - ( 10 ) Posts/လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ်
၁)Sales & Marketing Executive – Male/ Female - ( 10 ) Posts/လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် / ဗဟန်းမြို.နယ်​။ • Sales & Marketing Executive Position ဖြင့်လုပ်​ငန်းအ​တွေ.အကြုံ (၃) နှစ်​ရှိရမည်​။ • တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။ • Sales & Marketing နှင့် သက်ဆိုင်​သော Certificates ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။ • အသက် (၃၅)နှစ်​​အောက်​ ဖြစ်ရမည်။ • Computer (Word/Excel) ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • Personal Skill / Customer Relationship ကောင်းမွန်ရမည်။ •ရုပ်​ရည်​​ပြေပြစ်​ရမည်​။ • သင်​တန်း​ကျောင်းနှင့်​ သက်​ဆိုင်​​သောလုပ်​ငန်း အ​တွေ.အကြုံရှိသူဦးစား​ပေးမည်​။ . အလုပ်​ချိန်​ မနက်​ ၉:၀၀ နာရီ မှ ည​နေ ၆: ၀၀ နာရီ အထိတာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရပါမည်​။ . တစ်​ပတ်​တစ်​ရက်​နှင့်​ အစိုးရရုံးပိတ်​ရက်​များပိတ်​သည်​။ • ဗဟန်ြး​မို့နယ်တွင်ရှိသော Diploma သင်​တန်း​ကျောင်းတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဗဟန်းမြို.နယ် ​​တွင်ရှိသော Diploma သင်​တန်း​ကျောင်း ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales and Marketing Executive –Female – ( 8 ) Posts /လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁)Sales and Marketing Executive –Female – ( 8 ) Posts /လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်။ (Company မှ တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး ၀င်ရမည်။) (အင်တာဗျူး အမြန်ဝင်ရမည်။) - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။ - တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - Sales and Marketing Diploma or Certificate ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - Sales executive ပိုင်းနှင့်လုပ်သက်အတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - English စာ ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ - Marketing and Negotiating Techniques များကို ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Construction ပိုင်းနှင့် အတွေ့အကြုံ ရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ - အလုပ်ချိန် (8:30 AM to 5:30PM) - Saturday Alternate , Sunday and Public Holiday Off - မြောက်ဥက္ကာလာ မြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မြောက်ဥက္ကာလာမြို့နယ်ရှိ Construction ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09263121101 ,09- 977397705 , 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09263121101 ,09977397705 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Executive – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Sales & Marketing Executive – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သုဝဏ္ဏမြို့နယ် ( ရုံးချုပ် ) ။ • အိမ်ခြံမြေပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • Reporting ပိုင်းရရမည် ။ • ကိုယ်တိုင် report တင်ပြနိုင်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည် ။ • တစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်သည် ။ . သုဝဏ္ဏမြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction Company ကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သုဝဏ္ဏမြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction Company ကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Executive – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သုဝဏ္ဏမြို့နယ် ( ရုံးချုပ် )
၁) Sales & Marketing Executive – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သုဝဏ္ဏမြို့နယ် ( ရုံးချုပ် ) ။ • အိမ်ခြံမြေပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • Reporting ပိုင်းရရမည် ။ • ကိုယ်တိုင် report တင်ပြနိုင်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည် ။ • တစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်သည် ။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သုဝဏ္ဏမြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction Company ကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Executive – Female – (5) Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Electronic Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ၁ ) Sales & Marketing Executive – Female – (5) Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ -	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ BE/Btech ( Electrical ) ဘွဲ့ရဦးစားပေး မည်။ -	Tender ပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ -	Computer Word,Excel,Power Point အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ -	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည်။ -	အသက် ၂၅ မှ ၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ -	Construction ပိုင်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ -	English Intermediate Level ရရမည်။ -	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရတခါတရံနယ်သွားနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Sales & Marketing Executive - Female - (5) Posts/လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် /သာကေတမြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Media & Advertising Co.Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ ၁) Sales & Marketing Executive - Female - (5) Posts/လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် /သာကေတမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - English စာအသင့်အတင့်ပြောနိုင်ရမည်။ - Computer (Word,Excel,Internet & Email ) အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၅ မှ ၃၅ အတွင်းရှိရမည်။ - အိမ်ထောင်မရှိသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၃ နှစ်နဲ့ အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - လူအများနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်ရမည်။ sales & marketing အလုပ်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် တက်ကြွစွာလုပ်နိုင်ရမည်။ - မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု့ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ - သာကေတ၊သုဝဏ၊တောင်ဒဂုံ၊ရွာသာကြီး။မြောက်ဒဂုံ၊ဒေါပုံ၊ ယုဇန၊သင်္ဃကျွန်းတွင်နေထိုင်သူများကိုဦးစားပေးမည်။ -စနေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_2237" align="alignnone" width="569"] Concept image of Sales & Marketing onasignpost againstamodern glass office building.[/caption]
Sales & Marketing Executive – Male (5)Posts/ လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Sales & Marketing Executive – Male (5)Posts/ လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ - Interior Decoration နှင့်ပတ်သက်သည့် ပစ္စည်းများကိုရောင်းချ သည့်အတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ - Sales Target ပြည့်မှီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - ကားမောင်းတတ်ရမည်။ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - စနေနေ့တ၀က်နှင့်တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည်။ - Uniform ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_2237" align="alignnone" width="569"] Concept image of Sales & Marketing onasignpost againstamodern glass office building.[/caption]
Sales & Marketing Executive – Female (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Engineering Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ၁) Sales & Marketing Executive – Female (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်/သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ - Interior Decoration နှင့်ပတ်သက်သည့် ပစ္စည်းများကိုရောင်းချ သည့်အတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ - Sales Target ပြည့်မှီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - စနေနေ့တ၀က်နှင့်တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည်။ - Uniform ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales & Marketing Executive – Female - (5) Posts /လစာ- ၃၀၀,၀၀၀
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Consturction Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ၁) Sales & Marketing Executive – Female - (5) Posts /လစာ- ၃၀၀,၀၀၀ ~ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ဗဟန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၇ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - English စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်ရမည်။ - အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သံချောင်းများရောင်းခဲ့ သည်အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ - အလုပ်ချိန်မနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Executive – Female (5)Posts/လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Material Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales & Marketing Executive – Female (5)Posts/လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်/တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Sales & Marketing ပိုင်းဖြင့်ပတ်သက်သည့် Certificate (Or) Diploma ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ - အသက် (၂၅)၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ -Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Executive – Male /Female (5)Posts
URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Manufacturing Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales & Marketing Executive – Male /Female (5)Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ++++ / လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅)နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ - စားသောက်ကုန်ပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )